इजरायल – प्यालेस्टिनबिचको द्वन्द्व : जसले तेस्रो विश्वयुद्ध पुकारिरहेको छ ! | शुभयुग
इजरायल – प्यालेस्टिनबिचको द्वन्द्व : जसले तेस्रो विश्वयुद्ध पुकारिरहेको छ !
न्युज डेस्कप्रकाशित मिति: २०७८ जेष्ठ ४, मंगलबार (१ साल अघि)
४ जेठ,काठमाण्डौ – पुरै दुनियाँ कोभिड-१९ को चपेटामा छ तर इजरायल र प्यालेस्टिन भने रकेट र हवाई फायरको जङ्ग लडिरहेका छन् । प्यालेस्टिनको संगठन (हमास समूह) (इजरायलले यसलाई आतंकवादी संगठन भन्छ ) इजरायलमा रकेटको बर्षात् गरिरहेको छ भने इजरायल हवाई आक्रमण गरेर प्यालेस्टिनलाई ध्वस्त पारिरहेको छ ।
आजका दिन इजरायल र प्यालेस्टाइन बिच एउटा डरलाग्दो द्वन्द्व भइरहेको छ। इजरायल र हमास बीचको युद्ध विगत ८ दिनदेखि चलेको हो । यस आक्रमणमा दुवै पक्षका २०० भन्दा बढी व्यक्ति मारिएका छन्। मृत्यु हुनेमा ६० बालबालिका र ३७ महिलाहरू समावेश छन् । मृतकहरूमा १० इजरायलीहरू र बाँकी प्यालेस्टिनी हुन् । यदि इजरायल र प्यालेस्टिनबिच चलिरहेको यो द्वन्द्व चाँडै रोकिएन भने यो तेस्रो विश्वयुद्धको कारण पनि हुन सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । यसअघि सन् २०१४ मा हमास र इजरायलबिच भीषण युद्ध भएको थियो ।
तर प्रश्न यहाँ उठ्छ फेरी किन इजरायल र प्यालेस्टिन कट्टर दुस्मन बनेर पुरानो अध्याय किन सुरु गरिरहेका छन् ?
भर्खरका घटनाक्रमहरू के हुन् ?
विवादको सबैभन्दा नयाँ कारण इजरायलले शेख जर्रालाई खाली गर्नु हो । शेख जर्रा पूर्वी जेरूसलमको त्यो क्षेत्र हो जहाँबाट इजरायलले प्यालेस्टिनी परिवारलाई निकालेर यहुदी मानिसहरू राख्दै छ । प्यालेस्टिनीले यसैको विरोध गरिरहेका छन्। गत शुक्रवार रमजान महिनाको अन्तिम शुक्रवार थियो। यसै कारण, ठुलो सङ्ख्यामा मुस्लिम मानिसहरू जेरुसेलमको मस्जिद अल-अक्सामा प्रार्थना गर्न भेला भएका थिए। नमाजपछि यी मानिसहरूले शेख जार्राले आफूहरूलाई निकालेको विरुद्ध विरोध गर्न थाले।
यी प्रदर्शनहरू हिंसात्मक भए र इजरायली सेना र प्यालेस्टिनीबीच झडप भयो। रमजानमा मस्जिद अल-अक्सामा आउने मुस्लिमहरूको सङ्ख्या सामान्य दिनको भन्दा बढी थियो । इजरायलको पुलिसले सोही दिन जेरुसेलमकोको दमास्कस फाटकमा ब्यारेकेड गर्‍यो। मुस्लिमका अनुसार इजरायलको पुलिसले उनीहरूको धार्मिक स्वतन्त्रतालाई रोक्न खोजेको थियो । त्यसपछि बढ्दो विरोधलाई ध्यानमा राख्दै पुलिसले त्यहाँ लगाएको छेकबार हटायो । जुन हाल आक्रमण हुनेको प्रमुख कारण पनि हो ।
विवादको अर्को कारण पनि जेरुसेलम-डेलाई पनि बताइएको छ। जेरुसेलम दिवस अरब(इजरायली युद्धमा इजरायलको विजयको उत्सवको रूपमा मनाइन्छ। यस दिन इजरायलीहरू जेरुसेलमको पश्चिमी पर्खालमा प्रार्थना गर्छन् । पश्चिमी पर्खाल यहुदीहरूको लागि एक पवित्र स्थान मानिन्छ। यस भेलाको बेला पनि हिंस्रक झडप भएको थियो।
जेरुसेलम किन यति विवादास्पद ?
जेरुसेलम मुस्लिम, ईसाई र यहुदी धर्मका लागि विश्वासको केन्द्र हो। त्यहाँ अल-अक्सा मस्जिद छ। मुस्लिमहरू पैगम्बर मोहम्मद सोही मक्काबाट आएका विश्वास गर्छन् । मुस्लिमका अनुसार पैगम्बर मोहम्मदले स्वर्गको यात्रा गरेका थिए । मुस्लिमहरू मक्का र मदीना पछि तेस्रो पवित्र स्थान जेरुसेलमलाई मान्छन् ।
जेरुसेलममा इसाईहरूको पवित्र ‘द होली सेपलकर’को चर्च पनि छ। सारा संसारका इसाईहरू येशूलाई सोही ठाउँमा क्रूसमा टाँगिएको र त्यहीबाट येशूको पुनरुत्थान भएको ठान्छन् ।
जेरुसेलममा एक पश्चिमी पर्खाल छ। यहुदीका अनुसार उक्त स्थान पहिले त्यहाँको पवित्र मन्दिर थियो । र त्यो पर्खालको मन्दिरको शेष चिन्ह हो । त्यहीँ यहुदीहरूको सबैभन्दा पवित्र ठाउँ ‘होली अफ होलिस्’ छ । यहुदी हरू त्यहीँबाट इब्राहिमले आफ्नो छोरो इस्साकको बलिदान गरेको र त्यसपछि यो संसार सिर्जना भएको विश्वास गर्छन् ।
तीन वटा धर्मको पवित्र स्थल एक जेरुसेलम भएकाले पनि यो विवादको कारण भएको छ। १९४७ मा भएको युद्धमा इजरायलले पूर्वी जेरुसेलमलाई पनि कब्जा गर्‍यो। त्यस बेलादेखि इजरायलले यो सम्पूर्ण ठाउँलाई आफ्नो राजधानीको रूपमा लिन्छ। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले इजरायलको उक्त कुरालाई मान्यता दिदैंन । उता प्यालेस्टिनीहरुपनि प्यालेस्टाइन स्वतन्त्र राष्ट्र बने पछि यो उनीहरूको राजधानी हुने दाबी गर्छन् ।
के हो प्यालेस्टाइनको माग ?
प्यालेस्टिनीको माग इजरायल १९४७ भन्दा पहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा जानुपर्ने र वेस्ट बैंक तथा गाजा पट्टी एक स्वतन्त्र प्यालेस्टाइन राष्ट्रको स्थापना गर्ने रहेको छ । साथै इजरायलले पूर्वी जेरुसेलमलाई मुक्त गर्ने पनि प्यालेस्टिनीको इच्छा हो । ताकि जेरुसेलम स्वतन्त्र भएपछि प्यालेस्टाइनले आफ्नो राजधानी तोक्न सकोस् ।
के भन्छ इजरायल ?
इजरायलले प्यालेस्टाइनको मागलाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गरिरहेको छ। इजरायलले जेरुसेलमलाई कब्जाबाट स्वतन्त्र गर्न तयार छैन। इजरायल भन्छ जेरुसेलम हाम्रो राजधानी हो र अभिन्न हिस्सा हो।
ती दुईका विवादका क्षेत्रहरू ?
वेस्ट बैंकः वेस्ट बैंक इजरायल र जोर्डन बिच छ। इजरायलले यो १९६७ को युद्ध पछि यो क्षेत्रलाई कब्जा गरेको थियो । दुवै इजरायल र प्यालेस्टाइनले यो क्षेत्र आफ्नो भन्छन्।
गाजा पट्टी: गाजा पट्टी इजरायल र इजिप्टको बिचमा छ। हाल त्यहाँ हमासको कब्जा छ । हमास एक इजरायल विरोधी समूह हो। इजरायलले गाजा पट्टीबाट आफ्नो सेना हटाई विभिन्न प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
गोलन हाइट्स: राजनीतिक र रणनीतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण यो क्षेत्र सिरियाको पठार हो। यो १९६७ देखि इजरायली कब्जामा रहेको छ। यस क्षेत्रमा कब्जाको मुद्दामा शान्ति वार्ताको लागि धेरै प्रयासहरू भएका छन्। तर त्यहाँ कुनै सफलता प्राप्त भएको छैन।
इजरायलको म्याप बढो क्लियरसंग देखीन्छ । तर प्यालेस्टाइनको म्याप भने खोज्नुपर्ने हुन्छ । जुन कालो दर्शा लगाइएको भाग छ त्यसलाई वेस्ट बैंक भनिन्छ । र जुन इजिप्टसंगको सानो हरियो रङ लगाइएको भाग गाजा हो । अब त्यो पुरै नक्सामा जुन हरियो रङ लगाइएको छ त्यहाँ प्यालेस्टिनी बस्दछन् । र वेस्ट बैंकभित्र जहाँ सेतो रङ लगाइएको छ त्यहाँ इजरायलको कन्टा«ेल छ ।
संघर्ष कति पुरानो ?
यसको मुख्य जड हो जेरुसेलम सहरको पूर्वी भाग । यसलाई पूर्वी जेरुसेलम पनि भनिन्छ। यो प्यालेस्टिनी बस्तीको क्षेत्र हो। यहाँ एक स्थान छ (शेख जर्रा।) यो लगभग दुई शताब्दी पुरानो कुरा हो । जब ओटोम्यान साम्राज्यले प्यालेस्टाईनमाथि अधिकार जमाएको थियो । उही समयमा केही यहुदी संगठनहरूले प्यालेस्टाइनको इलाकामा जग्गा किन्दै थिए। पहिलो विश्वयुद्ध १९१४ मा सुरु भयो।
टर्कीले यस विश्वयुद्धमा मित्र राष्ट्रहरूको विरुद्ध सहयोगीहरूलाई साथ दियो । मित्रराष्ट्रमा बेलायत पनि समावेश थियो । यसैले टर्की र बेलायत आमनेसामने भए। त्यस बेला बेलायती साम्राज्य चरम सीमामा पुगेको थियो जसको परिणामस्वरूप बेलायतले युद्ध जित्यो र ओटोम्यान साम्राज्य बेलायतको कब्जामा आयो। यस समयसम्म, सियोनवादको चरम भावना सीमामा थियो। यो एक राजनीतिक विचारधारा थियो जसको उद्देश्य छुट्टै र स्वतन्त्र यहुदी राज्य स्थापना गर्नु थियो। यसै कारणले गर्दा संसारभर बाट यहुदीहरू प्यालेस्टाइनमा आउन थाले। १९१७ मा बेलायतका विदेश सचिव जेम्स बेलफोरले बेलायत प्यालेस्टाइनलाई यहुदीहरूको मातृभूमि बनाउन प्रतिबद्ध भएको घोषणा गरे ।
दोस्रो विश्व युद्ध १९४५ मा समाप्त भयो। यस युद्धमा बेलायतले ठुलो नोक्सान भोग्यो र सबै शक्ति गुमायो । यता यहुदीहरूले प्यालेस्टाइनमा प्रवेश गर्न जारी राखे र अन्य देशहरूले पनि यहुदीलाई पुनर्वास दिन बेलायतमाथि दबाब दिन थाले। अन्ततः बेलायत यस विषयमा पछि हट्यो र यो मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघमा गयो । नोभेम्बर १९४७ मा संयुक्त राष्ट्र संघले प्यालेस्टाइनलाई दुई भागमा बाँड्यो। इजरायल एक अरब राज्य बन्यो । र जेरुसेलम एक अन्तर्राष्ट्रिय सहर घोषित भयो।
लगत्तै अरब देशले संयुक्त राष्ट्र संघको निर्णयलाई अस्वीकार गर्‍यो उनीहरूका अनुसार जनसङ्ख्याको आधारमा कम जग्गा पाएका थिए वास्तवमा प्यालेस्टाइनले विभाजन पछि आधा भन्दा कम जग्गा प्राप्त गर्‍यो । जबकि विभाजन हुनुभन्दा अघि झन्डै ९० प्रतिशत भूमि अरबको कब्जामा थियो ।
त्यसपछि, इजरायलले आफैलाई एक स्वतन्त्र राष्ट्र घोषित गर्‍यो। अमेरिकाले तुरुन्तै इजरायललाई एक देशको रूपमा मान्यता पनि दियो।
अरब देशको इजरायलमाथि आक्रमण
इजरायलको आफ्नै राष्ट्र घोषणा गर्दै सिरिया, लिबिया र इराकले इजरायललाई आक्रमण गरे । यससँगै अरब-इजरायली युद्ध सुरु भयो। सफदी अरेबियाले आफ्नो सेनालाई युद्धमा पठायो र इजिप्टको सहायताले मिश्रमाथि आक्रमण गर्‍यो। यमन पनि युद्धमा सामेल थियो । यो युद्ध एक वर्षसम्म चलेपछि युद्ध विराम घोषणा गरिएको थियो । जोर्डन र इजरायल बिचको सीमा निर्धारित गरियो। जसलाई ग्रिन लाइन नाम दिइयो ।
१९६७ मा गाजा र वेस्ट बैंक माथि कब्जा
१९६७ मा अरब देशहरूले फेरि एक पटक इजरायलमा आक्रमण गरे। तर यस पटक इजरायलले उनीहरूलाई ६ दिनमै हरायो । अरब देशका वेस्ट बैंक गाजा र पूर्वी जेरुसलम आफ्नो हातमा लियो । त्यस बेलादेखि इजरायलले यी क्षेत्रहरू कब्जा गरिराखेको छ । त्यति मात्रै होइन इजरायल जेरुसेलमलाई आफ्नो राजधानी पनि बताउँछ । यद्यपि इजरायलले गाजाको हिस्सा प्यालेस्टिनलाई फिर्ता गरिसकेको छ । तर हाल धेरै प्यालेस्टिनीहरू गाजा पट्टी र वेस्ट बैंकमा बस्छन्। जसको कारण प्यालेस्टिनी र इजरायली सेनाको बिचमा संघर्ष चलिरहन्छ ।
योसँगै कोभिडसँग लडिरहेको विश्व पनि दुई हिस्सामा बाँडिएको छ। विश्व सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चार माध्यमहरूसम्म प्यालेस्टिनी र इजरायलबिचको युद्धमा दुई तिर भएका छन् । कुनै देशका मानिसहरू इजरायलको सर्पोट गर्छन् भने कोही प्यालेस्टिनीको । हिंसाको बदलामा हिंसाको कारण हालसम्म सयौं मानिसहरू मारिएका छन् । जहाँ बालबालिका पनि सामेल छन् जो निर्दोष छन् । प्यालेस्टिनी र इजरायलीहरू एक अर्कोलाई शत्रु र आतंकवादीका रूपमा हेर्छन् । यो सबै हुनुमा ती जनताको गल्ती नभई राजनीतिज्ञ र केही विद्रोहको सीमित स्वार्थका कारण भएको भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय बयान आइरहेको छ ।
इजरायल प्यालेस्टिन द्वन्द्व